Linux Mint ichiri chakakurumbira kugovera | Linux Vakapindwa muropa
Linux Mint ichiri chakakurumbira kugovera
Zvinoenderana neiyo distowatch yegore rose chinzvimbo chekuparadzira mukurumbira, Linux Mint ndiyo inonyanya kuzivikanwa kugoverwa kweLinux kwese, chinzvimbo chaakawanawo gore rapfuura.
Linux Mint ichiri chakanyanya kushandiswa kugovera, chimwe chinhu chine zvakawanda zvakakosha kubvira gore rino 2016 yanga isiri nyore kwavari. Tinorangarira kuti Linux Mint yakatambudzwa pawebhusaiti yayo, kurova kwakaomesesa kwavakazivikanwa kuti vapore nekukurumidza.
Chechipiri inotevera Debian, imwe yeakasimba uye ekare akagoverwa ezvese uye izvo inochengetedza nharaunda yakakura yevashandisi kunyanya pamusoro wenyaya yemaseva. Panzvimbo yechitatu tinowana Ubuntu, mugove uyo kunyangwe pakutanga pekutaridzika uchiita kunge wakakurumbira, hauna kukwanisa kupfuura chinzvimbo chechitatu.
Panzvimbo yechina tine OpenSuse,iyo inoshanda sisitimu yevanhu vekambani SUSE uye munzvimbo yechishanu isu tine Fedora inoshanda system, iyo inoramba iri pachinzvimbo chechishanu kunyangwe warasikirwa nemuteveri gore rino.
Panzvimbo yechitanhatu tine Manjaro, mugove unogadzikana kana kushoma uchienzaniswa negore rapfuura. Panzvimbo yechinomwe tine CentOS, munzvimbo yechisere chirongwa cheMageia uye munzvimbo yepfumbamwe tine Arch Linux, inoramba ichiwedzera mukuzivikanwa.
Pakupedzisira tine munzvimbo yegumi Zorin OS, inoteverwa neElementary OS, iyo yakakura zvakanyanya gore rino rapfuura. Kupedzisa runyorwa isu tine zvishoma zvisingazivikanwe zvekugovera se Android-x86, PCLinuxOS, Deeping kana Puppy Linux. Muchidimbu, runyorwa rwevakanakisa rwakaramba rwakadai.
Pasina kupokana vakundi vakuru vegore ndiLinux Mint, Arch Linux uye Elementary OS, kubvira Linux Mint se akakwanisa kuchengetedza kunyangwe aine matambudziko uye mamwe maviri anoramba achiwana vateveri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Linux Mint ichiri chakakurumbira kugovera
Icho ndechekuti Cinnamon ipasipasiti yekupfuura. Chakatove chakareruka asi dai chaive chidiki diki chingave chakanakira kuravira kwangu. Pamusoro nesitayiti yeLinux Mint ndeyeiyo cinema.
Juan Jose Miñor akadaro
Mhoro. Zvinondirova kuti Linux Mint (uye Debian, uye Fedora uye zvimwe zvinogoverwa) zvinoonekwa seyuniti, zvisinei nemamiriro edesktop (semuenzaniso, Mint Cinnamon neMint Mate vanoonekwa seMint) uye zvakadaro Ubuntu inoita kunge yakakamurwa (Ubuntu neUni ndizvo inofungidzirwa distro yakasiyana neUbuntu Mate kana Kubuntu, semuenzaniso). Kana zviyero zvimwechetezvo zvikashandiswa, kurongwa kwacho kwaizochinja.
Pindura Juan José Miñor
Jesu Moreno akadaro
Ini ndiri mutsva ku linux mint 18. Ndinozviona zvichishamisa. Chandisingade ndechekuti iwe unofanirwa kurodha pasi yekuwedzera mitauro mapakeji echiSpanish.
Pindura kuna Jesu Moreno
Nezve rekodhi, ini ndiri mushandisi we linux mint 17.3 mate, iyo ichinyatso shanda chaizvo mushe, ndiri kufara kwazvo nekuparadzirwa uku. Ndine timu yakati rebei uye ndinofara neLM, yakapenya uye ine simba.
Amiten yeiyo rowan shit akadaro
Linux mint debian edition yaive inotonhorera, nekukurumidza uye yakasimba kupfuura iyo yakavakirwa pane ubuntu
Pindura Amiten weiyo rowan shit
Zvirinani zvirinani Ubuntu nekure pane chero bazi rekugovera, kubatana, mukadzi, kubuntu, xubuntu, lubuntu. etc.
Daniel salinas akadaro
Iyo inobatawo kutarisa kwangu kuratidza Ubuntu yakakamurwa mumatafura ayo akasiyana uye mamwe ma distros anoonekwa seyuniti. Yakasimbiswa kuti manhamba anodudzirwa kuti zvive nyore
Pindura kuna Daniel Salinas
Izvo hazvisi zvechinhu, asi Linux Mint inoziva kushandisa zvisizvo zvayo zvishandiso nezvivakwa Iyo LM nzvimbo yakanyatsokodzera. Ngatitarisirei kuona Linux Mint yatove KDE = P
Mumwedzi mitanhatu DISTROWATCH LINUX MINT yawana mamakisi 6 uye mhuri yese yeUBUNTU mamaki e2.978 muchidimbu, kuti Ubuntu iri nani uye ine vateveri vazhinji kupfuura Linux Shit….
Pindura kuna Oscarón
Antonio Maria Marcos Ramos akadaro
Unofanira kunge uri wega. Paunenge uchida kushandisa mutauro wakashata mu blog nezve Linux, zvinoreva kuti haudiwe naMwari.
Pindura kuna Antonio Maria Marcos Ramos
Ini handioni hukama pakati penzanga, kutuka, kugona kwehukama kwaOscaron naMwari
Ichokwadi kuti mazwi akashata ari mazhinji. asi zvarinotaura maererano nezvakawanda zvakaita seizvi, ubuntu chechitatu nekuti zvinonaka zvacho hazvisi kuwedzerwa chimwe chinhu icho kana vachiita nemamwe ma distros
Iyo nyowani BlackArch Linux yatove neinopfuura zana nemazana mashanu ekupinda maturusi
Firefox 49 inokutendera iwe kushandisa Netflix isina akakosha plugins